မင်းရဲ့ Demand Generation Marketing Efforts ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် Customer Journey Analytics ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ Martech Zone
သင့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ဝယ်လိုအားမျိုးဆက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏ခရီးများတိုင်း၌မြင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်းတို့အားယခုနှင့်အနာဂတ်၌လှုံ့ဆော်ပေးသောအရာတို့ကိုနားလည်ရန်နည်းလမ်းများလိုအပ်သည်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ဧည့်သည်များ၏ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံး၌သင်၏ဧည့်သည်များ၏အပြုအမူပုံစံများနှင့် ဦး စားပေးမှုများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။ ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကသင့်အားရောင်းအားလမ်းကြောင်း၌အဆုံးသို့ရောက်ရန်ဧည့်သည်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောတိုးတက်သောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အတိအကျအဘယ်နည်း၊ သင်၏ ဦး ဆောင်မျိုးဆက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၎င်းကိုသင်မည်သို့သုံးနိုင်သနည်း။ ရှာကြစို့။
Customer Journey Analytics ဆိုတာဘာလဲ။
ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏ခရီးများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းကမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောချန်နယ်တွေကိုမင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေသုံးပုံကိုခြေရာခံပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သောချန်နယ်အားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကဲ့သို့အလိုအလျောက်ပြည့်စုံသောချန်နယ်များ
ကျွန်ုပ်သည် Customer Journey Analytics ကိုအဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်း။
ဖောက်သည်များ၏ခရီးသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာသည်နှင့်အမျှယနေ့ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလမ်းကြောင်းမျိုးစုံမှ Amazon နှင့် Google ကဲ့သို့ CX ခေါင်းဆောင်များနှင့်တန်းတူမျှော်လင့်ကြသည်။ မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ခရီးကလမ်းတစ်လျှောက်မှာချောမွေ့မှုမရှိရင်သူတို့ကမကျေမနပ်ဖြစ်လာပြီးပြိုင်ဘက်ဆီကိုမြန်မြန်သွားလိမ့်မယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်လေ့လာမှုများကဖော်ပြသည် အပြုသဘောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများ ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုကိုတွန်းအားပေးသည်။
လေ့လာမှုများအရဖောက်သည်တုံ့ပြန်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်သင်၏ CX အဆင့်ကိုတိုးတက်စေရန်လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းပြသသည်။ ဤရှုံးနိမ့်မှုသည်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်သာအချက်များတောင်းခံသည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤအရာသည် ၀ ယ်သူခရီးအချို့ကိုသာဖမ်းယူသည်၊ သင်၏ဖောက်သည်များ၏အလုံးစုံအတွေ့အကြုံများကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြနေသည်။
ဤမပြည့်စုံသောအချက်အလက်များသည်သင်၏ပြည့်စုံသောရုပ်ပုံနှင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်တိကျမှန်ကန်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိစေသည်။ ၎င်းသည်သင့်အား ၀ ယ်သူများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန်အားနည်းချက်တစ်ခုကိုလည်းချန်ထားခဲ့သည် ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုသိသာမြင်သာသောစီးပွားရေးရလဒ်များနှင့်တွဲထားပါ.
ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏ဖောက်သည်များ၏အပြုအမူများနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းရလဒ်များအကြားပေါင်းကူးဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအစီအစဉ်သည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုဖောက်သည်တစ် ဦး လုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သော touchpoint များနှင့်အချိန်အပိုင်းအခြားများစွာ၌ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုခြေရာခံ၊ တိုင်းတာရန်နှင့်တိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကဤနေရာကို ဦး တည်စေခဲ့သောမည်သည့်ယခင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသို့မဟုတ်ခရီးများလုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။
ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက် (သို့) ခရီးတစ်ခုအတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကဘာတွေလဲ။
ဖောက်သည်တစ် ဦး စီအတွက်ငါတို့တန်ဖိုးဘယ်လိုထည့်မလဲ၊ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ။
Customer Journey Analytics ၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ထိရောက်သောဖောက်သည်ခရီးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြည့်စုံသောဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထုတ်ပေးသည်။ ဤဖောက်သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မှရရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရောတန်ဖိုးရှိသည်။ ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ပိုကောင်းအောင်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံ (CX) - သင်၏ဖောက်သည်များ၏ခရီးများကိုထိရောက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်ရရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်ချောမွေ့သောအလုံးစုံအတွေ့အကြုံအတွက်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ခြေလှမ်းများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာနိုင်သောရလဒ်ရလဒ်များ ထို့ပြင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လမ်းကြောင်းများစွာကို ဖြတ်၍ ဝယ်လိုအားမျိုးဆက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပြုမှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာရန်နှင့်ခရီးတစ်ခုစီကိုတိုင်းတာရန်သင့်တော်သော KPI များကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အချက်အလက်များစွာကိုချန်နယ်များနှင့်အချိန်ဘောင်များမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် - လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့အချိန်ဘောင်တွေဖြတ်ပြီးဖောက်သည်တွေရဲ့ခရီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါစစ်မှန်တဲ့နာကျင်မှုအချက်တွေကသိသာထင်ရှားလာတယ်။ ဤနာကျင်မှုအချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကမင်းကိုအရေးယူပြီးသင့်ဖောက်သည်တွေရဲ့ခရီးကိုအပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တယ်။
Customer Journey Analytics ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ - ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် CX တို့တွင်ခေါင်းဆောင်များကပုံမှန်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သည်။ ဤခေါင်းဆောင်များချမှတ်သည် ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပလက်ဖောင်းများ သူတို့၏ဝယ်လိုအားကိုမြှင့်တင်ခြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနည်းဗျူဟာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုင်းတာနိုင်စွမ်းများတိုးတက်စေရန်။
Quantify CX ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ၏ ROI
Customer Journey Mapping နှင့် Customer Journey Analytics
ဝယ်လိုအားမျိုးဆက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူတစ် ဦး အနေနှင့်သင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်နေပြီဖြစ်သည် ဖောက်သည်ခရီးမြေပုံ ၎င်းသည်ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့တူညီသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါကကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ ခရီးမြေပုံရေးဆွဲခြင်းသည်အရည်အသွေးဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုအလေးပေးနေစဉ်၊ ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ပမာဏပိုများပြီးပိုကျယ်ပြန့်စွာပေါင်းစပ်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်အသေးစိတ်နှင့်တည်ငြိမ်သောလျှပ်တစ်ပြက်ပုံရိပ်များ - Journey mapping သည်သင်၏ဖောက်သည်အချို့၏ခရီးများ၏တည်ငြိမ်သောလျှပ်တပြက်ရိုက်ချက်များကိုသာပေးသည်၊ သင်၏ ၀ ယ်သူများစွာနှင့်သူတို့၏ထူးခြားသောအပြုအမူများကိုကိုယ်စားပြုရန်လိုအပ်သောအသေးစိတ်များမပါရှိပါ။
Static နှင့် Time-Based Data -ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာများဖြင့်မောင်းနှင်သည်၊ သင်ဖောက်သည်များ၏ခရီးသည်အချိန်နှင့်အမျှမည်သို့ပြောင်းလဲနေသည်ကိုမြင်နိုင်သည်။ ခရီးတစ်လျှောက်တွင်ရှုပ်ထွေးသောဘက်စုံစားသုံးသူခရီးများနှင့် touchpoints များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာနိုင်ခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ဖောက်သည်ခရီးအောင်မြင်မှုများကိုခန့်မှန်းရန်ကူညီပေးသည်။
စမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားနှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစမ်းသပ်ခြင်း -ဖောက်သည်ခရီးတစ်လျှောက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအားမြင်သာမှုမရှိလျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖောက်သည်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးတွင်တိုးတက်မှုသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်ကျန်ရစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းတီးနိုင်ရုံသာမကပြဿနာများသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုအတိအကျမဖော်ပြသောစျေးကွက်ရှာဖွေသူများကိုစောင့်နေလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကို touchpoints များနှင့်အချိန်ကာလများတစ်လျှောက်တိုးတက်မှုများမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်ဤအပလီကေးရှင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအားအချိန်နှင့်တပြေးညီဖောက်သည်အတွေ့အကြုံအပြန်အလှန်တိုးတက်မှုများ၏အောင်မြင်မှုနှင့်ခြေရာခံရန်ကူညီပေးသည်။
စက်သင်ယူမှုနှင့် AI တို့ဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား CX ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသောဖောက်သည်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်နာကျင်မှုအချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုများသည်အချက်အလက်များမောင်းနှင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖောက်သည်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နှင့်အခွင့်အလမ်းများကို ဦး စားပေးခွင့်ပြုသည် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုကိုတွန်းအားပေးသည်.
ရက် ၉၀ အတွင်းပိုက်လိုင်း ၃၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုထုတ်လုပ်လိုပါသလား။
Tags: ဖောက်သည်အပြုအမူဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖောက်သည်အထောက်အထားများဖောက်သည်ခရီးဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖောက်သည်ခရီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများဖောက်သည်ခရီးမြေပုံcxဝယ်လိုအားမျိုးဆက်ဝယ်လိုအားထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်ရယ်စရာဘက်စုံသုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဝင်ငွေတိုးတကျမှုcustomer trip analytics ဆိုတာဘာလဲ